होमपेज, यसलाई आफु गर्नुहोस्
सबैभन्दा धेरै प्रिय बच्चाहरूको खिलौना एक चाटना हो। उनले आकार परिवर्तन गर्न सक्षम छन्, ढोकाहरू र पर्खालहरूमा लुगा लगाउँदा, उनीहरूमा कुनै निशान छोडेर। यद्यपि, धेरै यस्ता खिलौनेहरू जुन पसलहरूमा बेचेका छन्, सबै गुणस्तरको स्तरहरू पूरा गर्दैनन् - तिनीहरू पर्यावरणमै अनुकूल छैनन्। यसैले, यस लेखमा हामी कसरी घरमा लिजना बनाउन विचार गर्नेछौं, जुन निश्चित रूपमा तपाईं न त तपाईंको हानिलाई हानिकारक हुनेछैन।
हामी गुणात्मक कल्पना गर्दछौं
घरमा चालक बनाउन थुप्रै तरिकाहरू छन्। तिनीहरूमध्ये केही सरल छन्, अरुलाई घटक चाहिन्छ, जुन तपाईंलाई फार्मेसीमा वा हार्डवेयर पसलमा किन्न आवश्यक छ। त्यसैले पहिला हामी त्यस्ता खिलौना सिर्जना गर्न आवश्यक घटकहरू चिन्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए, लिज्युना कसरी गर्ने तरिकामा पहिलो तरिका समावेश छ जुन तपाईंको घरमा नहुन सक्छ:
ताजा पीवीए गोंद (150 मिलीलीटर);
थोरै न्यानो पानी (200 मिलीलीटर);
खाद्य र साधारण साधारण;
4% बोरक्स समाधान (यसलाई कुनै फार्मेसीमा खरिद गर्न सकिन्छ, र यदि होइन भने, पाउडरको रूपमा बोरैक्स लाई प्रतिस्थापन गर्नुहोस्);
रबर को दस्ताने।
त्यसोभए, पहिले हामी पानीमा डाई भंग गर्छौं। यदि यो खरीद मिश्रण हो, त्यसपछि निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। यदि तपाइँ हरियो प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसपछि केही बत्ती पर्याप्त हुनेछ। मुख्य कुरा यो राम्रो तरिकाले मिश्रण गर्न छ कि पानी एक वर्दी छाया हो। त्यसपछि पानीमा ग्लुलो लगाउनुहोस् र फेरि सबै कुरा राम्ररी मिश्रण गर्नुहोस्। अधिक गोंद, अधिक तपाईंको खिलौना हुनेछ।
प्रक्रियालाई थप विवरणमा ट्रयाक गर्नुहोस्
धेरैले थाहा छैन कि कसरी lizun अगाडी बनाउन को लागी, किनकि अक्सर वृद्धि उपेक्षित छन्। हामी रहस्य प्रकट गर्दछौं र अगाडी बढाई प्रक्रियाको कदमद्वारा वर्णन गर्नुहोस्: यो पानीमा सुक्खा पाउडर (ब्याक्स्याक्स) भंग गर्न आवश्यक छ, कडा रूपमा प्याकेजमा निर्देशनहरू पछ्याउन आवश्यक छ। त्यसपछि बिस्तारै यसलाई मिश्रणमा ग्लु र पानीबाट जलाउनुहोस्। यो गर्दा गर्दा, चाटनाको चिपचिपापनको लागि हेर्नुहोस्। यदि तपाईले धेरै टेटिभेटेट भर्नु भयो भने, यो धेरै गाह्रो हुनेछ। यदि तपाईं विपरीत गर्नुहुन्छ भने, खिलौना फैलनेछ र कुनै प्रकारको बचत गर्न सक्षम हुनेछैन। त्यस पछि, हामी सम्पूर्ण मिश्रण एक प्लास्टिकको थलो र डन्नीमा छिमेकी हातमा राख्छौं। सबै कुरा, खिलौना तयार छ!
छोटो अवधिको आनन्द
अब विचार गर्नुहोस् कि कसरी tetraborate बिना लिजुना बनाउन। यो विधि धेरै छिटो र थप बजेट हो, त्यसैले गरौं। तपाईंलाई मिट्टी, जेलाटिन र आधा गिलास पानी चाहिन्छ। पहिलो, पाउडरबाट जेली तयार पार्नुहोस्। यसलाई वांछित अवस्थामा कुक गर्नुहोस्, र केही समयको लागि छोड्नुहोस्। त्यसपछि 50 ग्राम पानी फोलो र माटो फोडा पार्नुहोस्, टुक्राहरूमा लुकाउनुहोस्। जब मिश्रण कामुक हुन्छ, यसलाई जेलीमा राख्नुहोस् र सबै कुरा राम्ररी मिलाउनुहोस्। लिजुन तयार छ, तथापि, उसले तपाईंलाई सेवा गर्नेछ दुई हप्ता भन्दा बढी।
धेरै आमाबाबुले सोडियम बिना लिजुना कसरी गर्ने भन्ने बारे चिन्तित छन्, तर एकै समयमा, यसले लामो समयको लागि सेवा गरिरहेको छ। यसको लागि तपाईंलाई पानी र स्टार्च चाहिन्छ। बराबर अनुपातमा, हामी दुई घटक र टोपी टोपीमा मिश्रण गर्छौं। साथै, यस्तो पदार्थमा थप प्रभावकारी उपस्थिति दिन तपाईंले केही आवश्यक तेललाई डिप गर्न डाई, सेप्टिन्स र स्वादको लागि थप्न सक्नुहुनेछ।
घरमा लिजाना कसरी बनाउने भन्ने बारे जान्दछन्, तपाइँ नयाँ आकारहरू र रंगहरू सिर्जना गर्न विभिन्न प्रयोगहरू सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खिलौना न केवल बालबालिकाको मनोरञ्जनको लागि सेवा गर्न सक्छ, तर एक उपहारको रूपमा पनि जुन वयस्कको मूड लिनेछ।
कसरि drywall को एक आर्क बनाउन आफै: एक पेशेवर समाधान
कसरी आफ्नै हातहरू माछा माछाको लागि तह तह बनाउन
हामी आन्तरिक र सबैभन्दा साधारण सामग्री सजावटको लागि घर बनाएको लैंप बनाउँछौं
घरको लागि आकर्षक र उपयोगी घर
आफ्नै हातको साथ घडी
Wi-fi को लागी एन्टेना: एक आरेख, निर्देशन, कार्यको विवरण
तपाईं अरिङगाल के सपना थाहा?
घर मा अचार ट्राउट
कानुनी निकाय गठन
Fibroskanirovanie कलेजो - कलेजो अनुसन्धान गर्न आधुनिक, neinvaziny तरिका
कसरी आफ्नो हात संग मास्टिक देखि गुलाब बनाउने? मास्टर वर्ग
राउटरले वाईफाईमा इन्टरनेट किन वितरित गर्दैन? समस्या निवारण
Mulled रक्सी लागि। mulled रक्सी लागि रक्सी कस्तो चाहिन्छ?
पुरानो थकान सिंड्रोम लक्षण।
को सुधार, व्यायाम, रोकथाम, कारण: साना schoolboys मा Dysgraphia
जलजीवालय: आफ्नै हात को निरूपण। जलजीवालय सजावट लागि शैलीहरू र विकल्पहरू
घोडा कसरी बनाउने सिक्नुहोस्। लाग्यो र कागज बाहिर आफ्नो हातमा शिल्प
प्राकृतिक पत्थर बनेको बगैचा बाटो